हामीले त्यस्तो के अपराध गर्यौँ र जेलमा थुन्न बाध्य भएको छ वर्तमान सरकार ? हामीले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो कुनै सुखसुविधाको माग पनि त गरेका थिएनाँै जुन सरकारले पूरा गर्न नसकेर जेल पठायो । देशको खम्बा भनिएका युवा आज संसारका गल्लीमा भौँतारिदैँ सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् र दाससरहको जीवन बाँचिरहेका छन् । नेपाली छोरीहरू अफ्रिकी महादेश केन्यासम्म बेचिन पुगेका छन् । हामीले भन्यौँ– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरौँ । उद्योग, कलकारखाना खोलेर देशमै रोजगार सिर्जना गरौँ । राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गरौँ ।
के यो कुनै अपराध हो र ? भ्रष्टाचारले थिलथिलो र बर्बाद भएको हाम्रो मुलुकलाई बचाउन भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरौँ, भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ र त्यो रकम राष्ट्रको उन्नतिमा लगाऔँ । के यो हिंसा भयो र राज्य हामीलाई बन्दी बनाउन बाध्य बनोस् ।
जहाँसम्म फागुन १० को घटनामा सिंहबहादुर गुरुङजीको मृत्युको सन्दर्भ छ, त्यो एकदमै कारुणिक, पीडादायी र दुःखद् दुर्घटना हो । मैले पाएको जानकारीअनुसार मानवीय क्षति पु¥याउने पार्टीको योजना थिएन । मलाई यही घटनासँग जोडेर जेल पठाइएको छ । जब कि म त्यो समयमा नवलपुर जिल्लाको पहाडी गाउँ बुङ्दीकालिका गाउँपालिकाका गाउँहरूमा क्षितिज परिवार र सामना परिवारका कलाकारहरूसहित सङ्गठनात्मक अभियानमा थिएँ उदयको नाउँबाट । यस विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न त्यहाँका पालिकाप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रहरी अधिकृतसँग पनि सूचना लिन सक्छ । गुरुङ बन्धुको निधन एकदमै अकल्पनीय र अनपेक्षित घटना हो र यस सवालमा म पार्टीको एक जिम्मेवार कार्यकर्ता भएकाले यदि गुरुङ परिवारले हदैसम्मको सजाय माग गर्नुहुन्छ भने यो पङ्क्तिकार खुलामञ्चमा फाँसीको तख्तामा लट्किन पनि तयार छ । किनकि नवलपुरको पाखामा जनतासँग नाच्दैगाउँदै गर्दा जब मैले त्यो भयङ्कर दुःखदायी घटना सुनेँ, मेरो मुटु नराम्ररी निचोरिएको थियो । मन शोकाकुल बनेको थियो भने उहाँको परिवारलाई त्यसले कति गहिरो पीडा दियो, म त्यसको गहिराइ बुझ्दछु । यहाँ हाम्रा क्षमायाचनाले उहाँको मनमा शान्ति छाउँदैन । त्यसैले मैले फाँसीको कुरा गरेको हुँ ।